advice Archives - Isbitaalka Harley Street Clinic London Isbitaalada Tijaabinta Gaarka ah Caafimaadka
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay January 12, 2021 Waxaa qoray Xarunta Caafimaadka ee Harley Street
Qalliinka qurxinta ayaa caan ku noqday dhowrkii sano ee la soo dhaafay, badanaa waxaa ugu wacan sumcado badan oo caan ah iyo tabinta warbaahinta. Hadday tahay ballaadhinta naasaha, Qalabka dhabannada ama liposuction ee London, kala duwanaanta daaweynta si tartiib tartiib ah ayey u koraan sanad ka sannad. Mid ka mid ah arrimaha ugu waawayn ee badan ee soo food saara ayaa ah rugta caafimaad ee loo adeegsado habka qalliinka qurxinta. Mid ka mid ah xarumaha caafimaadka qalliinka qurxinta ee ugu horreeya ee laga heli karo aagga London, is a renowned and reputable Harley Street cosmetic surgery clinic, called CSC or Cosmetics Surgery Clinic, led by Dr Alan Kingdon, who himself has over 30 years experience as a cosmetic surgeon. The clinic offers outstanding levels of customer service as well as a comprehensive range of cosmetic procedures and its online presence is located at http://www.cosmeticsurgeryclinic.co.uk.
For a comprehensive range of ccosmetic procedures , rugtan caafimaad ee qalliinka qurxinta ee Harley Street waxay bixisaa khibrad iyo aqoon fara badan oo leh macaamiil diiradda saaraya macaamiisha oo ay weheliso websaydh macluumaad iyo adeegsi saaxiibtinimo leh. Booqasho http://www.cosmeticsurgeryclinic.co.uk waxay siin doontaa booqdaha macluumaad fara badan iyo hagitaan awood leh oo ka caawiya inay gaaraan go'aan aqoon leh.
Wixii macluumaad dheeraad ah booqo http://www.cosmeticsurgeryclinic.co.uk
Qoraagu wuxuu wax ka qoraa maadooyin kala duwan
Inbadan Maqaallada Xarunta Caafimaadka ee Harley Street